बजेट भाषणपछिका गज्जबका दृश्यहरु ! | चितवन पोष्ट
बजेट भाषणपछिका गज्जबका दृश्यहरु !
हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते नेपाल सरकारले संसद्मा अनिवार्यरुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएअनुसार बजेट भाषण पनि निर्धारित समयमै भयो । केही दिनसम्म संसद्मा प्रस्तुत बजेटसम्बन्धी छलफल चलिरह्यो र प्रत्येक दिनजसो अर्थमन्त्री सचेत भई उठेका जिज्ञासाहरुको उत्तर दिनमै व्यस्त रहे । निकै दिनको छलफल, कठिन परिश्रम र रातदिनको खटाइपछि अर्थमन्त्रीले बजेटलाई एउटा आकारमा ल्याई प्रस्तुत गरिसकेका छन् र अबको चुनौती भनेको उनले संसद्मा दिएको जवाफको कार्यान्वयन नै हो । यस आलेखमा यो बजेट केकस्तो छ र त्यसका राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरु के–के छन् भन्नेतर्फ प्रसंग जाने छैन, बजेट भाषणपछिका राजनीतिक तथा आमनागरिकका मन–मस्तिष्कमा हुनसक्ने कौतुहलताहरु र देखिएका दृश्यहरुको मात्र मोटामोटी प्रस्तुतीकरण हुनेछ ।
२. बजेटप्रतिको बहस
बजेट आउनुपूर्व यसवर्षको बजेट कस्तो आउने होला भन्नेसम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताबीच चियागफहरु चलिरहेका थिए भने कसैलाई यसबारे खासै चासो पनि थिएन । साउन लागेपछि राजस्व तथा कर बढ्छ, सामान महँगो हुन्छ, सबै चीजमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्नेमात्र धेरैलाई थाहा थियो । अर्कोतर्फ, वृद्धवृद्धाहरुमा छुट्टै खालका शंका र आशंकायुक्त छलफलहरु चलिरहेका थिए भने कर्मचारी वर्गमा पनि यसवर्षको बजेटप्रति निकै आशा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । कतै यसवर्ष पनि सरकारले झुक्याउने त होइन ? भन्ने शंकाहरु पनि कर्मचारीहरुमा थिए । तर, यसपटकको बजेट भाषणले सबै शंका र आशंकाहरुलाई चिर्दै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुने गरी र वृद्धहरुलाई सम्बोधन हुने गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसो त, गत वर्ष जतिसुकै मोटो बजेट प्रस्तुत गरे पनि विकासको लागि छुट्याइएको बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । केवल प्रशासनिक खर्चमात्र बढेको वा नपुग भई अन्यत्रबाट सट्टाभर्ना गर्नु परेको छ । निरन्तर व्यापार घाटामा रहेको अवस्था यद्यपि छँदैछ ।
बजेटले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउला भनेर कुरेर बसेका जनताहरुको मिश्रित आवाज यसवर्षको बजेटप्रति पनि उठेको छ । कार्यान्वयनमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अहिले पनि देखिँदैन भनेर जोकोहीले भनिरहेको अवस्था छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको गणतान्त्रिक कम्युनिस्ट सरकारले यसवर्ष आफ्नै चुनावी घोषणापत्रअनुसार समेटेर ल्याएको समाजवादी प्रकारको जनपक्षीय बजेट भन्दै दाबी गरिरहेको छ । मनमोहन सरकारको पालामा उठाइएको लोकप्रिय नारा भएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रम पुनः ल्याइएको छ भने देशमै रोजगारी सृजना गर्ने बजेट भनेर दाबी गरिएको छ । यस बजेटप्रति सकारात्मक आशा राख्न त पाइन्छ, तर सरकारका गतिविधिहरु हेर्दा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले भनेजस्तो भ्रष्टाचाररहित तरिकाले समृद्धि नै ल्याइहाल्लाजस्तो देखिएको छैन ।
संसद्मा चलिरहेको बजेटको छलफल गज्जबको थियो । बजेट उही हो, त्यसलाई सत्तापक्षले अति राम्रो देख्ने तर प्रतिपक्षीको नजरमा असाध्यै खराब र खत्तम देख्ने दोहोरी चलिरह्यो, जुन पूर्वअनुमान गरेजस्तै भयो । अर्थमन्त्रीले कता–कता हिसाबकिताब र जोडघटाउ गर्न बिगारेको वा नजानेको कुरा पनि उठ्यो । कनिका छराई र वितरणमुखी बजेट भन्नु पनि कुनै नयाँ कुरा नभई पूर्वअनुमान गरिएकै कुरा थिए, जुन राजनीतिक, आर्थिक र बौद्धिक वृत्तमा छलफलका विषयवस्तु बन्न सक्लान् आगामी दिनमा ।
३. बजेट भाषणपछि आएका प्रतिक्रियाहरु
सदाझैँ यसवर्ष पनि बजेट भाषणपछि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएका प्रतिक्रियाहरु अनुमान गरिएझैँ आएका छन् । यी प्रतिक्रियाहरु सुन्दा हामी त्यसैमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ र रेडिमेड जवाफ दिइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ । हुन पनि, नयाँ सोचका साथ नयाँ किसिमले प्रस्तुत हुने कुरालाई छाडेर पुरानै ढर्रा अपनाउने एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कातर्फ खाली खराबमात्रै देख्ने हाम्रो अभ्यास नै भइसकेकोले यसलाई सहजै हटाउन पनि सकिँदैन । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण सकेपछि लगत्तै टीकाटिप्पणीहरु चर्कोरुपमा उठ्न थालिहाल्छन् । न बजेट भाषण राम्रोसँग सुनिएको हुन्छ न अध्ययन गरिसकिएको हुन्छ, केवल अनुमानका आधारमा र हचुवा तरिकाले सञ्चारका साधनसामु प्रतिक्रियाहरु सुनाउन मन लागिहाल्छ र हामी प्याच्चै भनिदिन्छौँ कि यो बजेट निकै राम्रो छ (सत्तापक्षले भन्ने थेगो) र यो बजेट राम्रो छैन (प्रतिपक्षीले भन्ने थेगो) । हामीलाई हचुवाको आधारमा यो कुरा भन्ने अभ्यास नै भएको छ । बजेट भाषणपछि बिनातयारी र बिनाअध्ययन निम्न रेडिमेड जवाफ हामीले प्रायः सबैका मुखबाट सुन्ने गर्छौं :
— यो बजेटले खासै नयाँ कुरा ल्याउन सकेन ।
— यो बजेट निरन्तरताको एउटा कागजी खोस्टोमात्र हो ।
— यो बजेटमा दूरदर्शिता छैन ।
— बजेटमा धेरै कुराहरु भनिएका भएता पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।
— बजेट बढी मह¤वाकांक्षी भयो ।
— बजेटले आमसर्वसाधारणलाई समेट्न सकेन ।
— बजेट कनिका छराइको रुपमा नै आयो ।
— बजेट आफ्ना कार्यकर्तामात्र पोस्ने किसिमले आयो ।
— बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताले मात्र काम ग¥यो र अरुप्रति सरोकार राखिएन ।
— बजेट बनाउँदा पूर्णरुपले सरसल्लाह र सोधपुछ चलाइएन ।
— बजेट नाममात्रको कार्यक्रमको पोकोमात्र भयो ।
— सरकारले दिएका नाराहरु पूरा गर्ने खास कार्यक्रम नै बजेटले दिएन ।
— नीति र कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भयो ।
— यो बजेटले महँगी बढाउने भयो ।
— बजेटले कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेन ।
— बजेटमा भाषण बढी र कार्यक्रम कम भयो ।
— बजेट पुरानो ढर्राको छ र यसले कुनै नयाँपन ल्याएन ।
— यो बजेटले कसरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ?
— जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको पर्याप्त ध्यान जान सकेन, विनियोजन नै कम भयो ।
— जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेन आदि आदि ।
४. अहिलेको संसद्को बिजनेस
बजेटप्रतिका बहसयुक्त दृश्यहरुले अझै केही दिन मिडिया तताउनमा मसला पुग्नेछ । विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रियाका बाबजुद संसद्मा बजेटका छmलफलहरु सुन्ने व्यक्ति कोही नभए पनि चलिरहेको थियो र औपचारिकताका लागिमात्रै संसद् चलिरह्यो, यसमा कुनै दुईमत छैन । संसद्मा मह¤वपूर्ण विषयमा चलिरहेको छलफलको उपस्थिति हेर्दा लाज लाग्दो देखियो । मजदुर किसान पार्टी र प्रतिपक्षी कांग्रेसले नै बढी मात्रामा संशोधन प्रस्ताव औपचारिकताका लागि हाले, जुन केही दिनका लागिमात्र थिए । किनकि, बजेटमाथिको छलफल सिद्धिएपछि सभामुखको एउटा प्रस्तावले बजेट पारित भयो, यसमा कुनै शंका थिएन । अहिले सदनमा रहेको दुई तिहाइको उपस्थितिले यस्तो ग¥यो र गरेरै देखायो ।
यस वर्षको बजेटको अर्को रोचक पक्ष व्यापक विरोधका बाबजुद सांसद्हरुले आफूले माग गरेबमोजिम बजेट हात पार्न सफल भएका छन् । १० करोड माग्दा बार्गेनिङमा ६ करोड पाइनुलाई पनि सांसद्हरुले राम्रै मानेका छन् र चित्त बुझाएका छन् । भलै, यसमा रकम दुरूपयोग हुने अनुमान गरी संविधानविपरीतको काम भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र सुनुवाइ अवश्य हुनेछ, यसमा धेरै कुरा बोल्दा राम्रो नहोला । तर यसपटक प्रतिपक्षी दलको कुरा यस सन्दर्भमा अनुमान गरेभन्दा फरक आएको छ । अनुमान के थियो भने सबै सांसद्ले त्यत्रो बजेट प्राप्त गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन, सबै एकढिक्का हुन्छन् भन्ने थियो । तर, यसपटक प्रतिपक्षी दलका केही सांसद्हरुले ६ करोड बहिष्कार गर्ने हल्लासमेत फिँजाए । अन्तमा त के होला, तर अहिले यो नसोचेको कुरा बजारमा आएको छ । त्यस्तै, केही कांग्रेसका सांसद्हरुले यसरी सांसद्लाई छुट्याएको रकम एकमुष्ट गरी कुनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगाऔँ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यो कुरामा स्वयं सांसद्हरु कतिञ्जेल टिक्न सक्लान्, त्यसको केही दिन प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।
सदाझैँ यसपटक पनि संसद्मा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ । निकै मोटो रकमको बजेट त आयो, तर कहाँबाट र केकसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा केही रोचक पक्षहरु छन् । रोचक कसरी भने बजेट भाषण ठूलो रकमको गरियो, तर स्रोत खोज्दै जाँदा त सबै बजेट लगभग विदेशी ऋण, सापटी र अनुदानमा अनुमान गरी बनाइएको रहेछ । बाँकी बचेखुचेको बजेटचाहिँ रेमिट्यान्स र राजस्वको अनुमान रहेछ । अर्कोतिर देशमै युवाहरुलाई रोजगारी दिने र रोजगार नभए बरू भत्ता दिने कुरा पनि छ । अब युवाहरु विदेश जान नपर्ने भनेर प्रचार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा गरिएको रेमिट्यान्समाथिको बजेट योजनाले कसरी समृद्धि र विकास आउन सक्ला र खै ? त्यस्तै, यसरी बनाइएको बजेट योजनाअनुसार काम हुँदा बजेट कसरी खर्च होला ? यदि सोचेजसरी ऋण, अनुदान र सहयोग नआए त देश अगाडि बढ्ने र विकास हुने त सम्भवै रहेनछ नि । त्यसकारण, बजेट बनाउँदा यावत् कुराहरुलाई पनि ध्यान दिई सानै आकारकै भए पनि पूर्णरुपले खर्च गर्न सकिनेजति बनाउन सकेमा मात्र विकास र समृद्धि आउन सक्ला, अन्यथा बिरालो बाँधेर के जाति गर्ने भनेजस्तै संसद्को रोइलो एक रमाइलो जात्रामात्र हुनेछ ।
(प्राध्यापक, मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती नवलपुर)